The Daily Mail International – Leading English Newspaper from Pakistan – Zimbabwe abandons Pakistan Cricket tour
Zimbabwe abandons Pakistan Cricket tour
KARACHI: The Zimbabwe cricket team has suspended its anticipated tour of Pakistan on the advice of its sports regulatory body just days before it was scheduled to arrive in Pakistan to play three one-day and two T20 matches.
“The decision not to tour at this time has been taken after considering the advice from the country’s supreme sports regulatory authority, the Sports and Recreational Commission (SRC),” Zimbabwe Cricket said in a statement.
Earlier today, reports had emerged that Zimbabwe’s authorities were assessing the security situation in Pakistan after a terrorist attack in Karachi killed 45 people on Wednesday.
Pakistan was all set to host top-level international cricket for the first time in six years with Zimbabwe starting their tour to the country on May 19 to play three one-day internationals and two Twenty20s in Lahore.
Zimbabwe, with this tour, would have become the first ICC full member team to visit Pakistan since March 2009.
Since the deadly attack on the Sri Lankan team in Lahore in 2009, only non-Test-playing Kenya and Associates Afghanistan have toured Pakistan.
Pakistan and Zimbabwe last faced off in Zimbabwe two years ago with coach Dav Whatmore at the helm.
Indian PM meets China's Xi on home ground Two Pakistanis among 14 killed in assault on Kabul guesthouse